July 24, 2019 - Pardeshi Khabar
लमजुङमा बाढीले तीनजनाको मृत्यु, दर्जन बढी वेपत्ता, हाइड्रोपावरमा ठूलो क्षति
Post by: परदेशी खबर प्रकाशीत मिति: July 24, 2019
lबेंसीसहर : लमजुङको दोर्दीखोलामा बुधबार दिउसो अचानक बाढी आउँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बाढीले बगाउँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ । दर्जनौँ वेपत्ता छन् । दोर्दी गाउँपालिकाको वडा नं. ४ शेरापुलनजिकै दुईजना र वडा नं. ६ को किर्तीपुरबेसीमा एकजनाको शव फेला परेको छ । उनीहरुको पहिचान हुन नसकेको दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताए । बाढीले अन्य धेरै जनधनको क्षति पुर्याएको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय धर्मराज गुरुङका अनुसार छोटेखोलाका कुमार लामाको ट्याक्टर र चालक बगाएको छ । चालकको परिचय खुलेको छैन । मनास्लु हिमाल काखबाट बगेको दोर्दीमा मुहानफुर्सदमा
सिन्धुलीमा चट्याङले पाँच वर्षमा ८ को मृत्यु, १८ गम्भीर
सिन्धुली : सिन्धुलीमा वर्षेनी चट्याङको त्रास हुने गरेको छ। सामान्य वर्षा हुँदा होस् या चट्याङका कारण वर्षेनी ज्यान गुमाउने र घाइतेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा चट्याङले मानवीय क्षति बढी हुने गरेको छ।यस्तै भौतिक र पशुपंक्षीको क्षती पनि हुने गरेको छ। सिन्धुलीका प्रहरी प्रमुख चक्रबहादुर सिंहका अनुसार २०७२ यता मात्र जिल्लामा चट्याङ लागेर ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना गम्भीर घाइते भएका छन्।चट्याङले यही साउन ५ गते आइतबार मात्र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका २ चैनपुरमा ११ वर्षका नवराज तिरुवाको मृत्युफुर्सदमा
परदेशी खबर/ काठमाडौं : निर्माता छवि ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुजी जारी गरेको छ। बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। बुधबार छवि र शिल्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुद्दा फाटका अधिकृत टीकासिंह खत्रीले जानकारी दिए। छविकी पहिली श्रीमती हेमा ओझाले उनीहरुविरुद्ध बहुविवाहको निवेदन दिएकी थिइन्। सोही अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंले छवि र शिल्पाविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको खत्रीको भनाइ छ। महानगरीय प्रहरी परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले छवि र शिल्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेकोफुर्सदमा
साउन ८l आईसीसी ट्वान्टी २० विश्वकप एसिया छनोटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले महत्वपूर्ण जित हासिल गरेको छ । मलेसियालाई ७ विकेटले पराजित गरेपछि नेपाल उपाधि होडमा फर्किएको छ मलेसियाले पेश गरेको ८४ रनको लक्ष्य नेपालले ३ विकेटको क्षतिमा ८ ओभरमै पूरा गरेको हो । वर्षाका कारण खेल ९ ओभरमा झारिएको थियो । कप्तान पारस ढाडको समस्याका कारण आराम गरेपछि नेपालको ओपनिङ ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रदीप ऐरीले सम्हालेका थिए । यी दुईले पहिलो विकेटका लागि ६६ रनको साझेदारी गरेपछि नेपालको सहज जित सम्भव भएको हो । यो ट्वान्टी २० मा नेपालीफुर्सदमा
प्रेमको शब्द र परिभाषा गर्न पनि कठिन छ । मानव जन्म जात नै मायाँ, प्रेम, दया र करूणा लिएर धर्तिमा पाइला टेकेको हुन्छ । तर अहलेको समय भनेको दया मायाँ करुणा भनेको के हो भने प्रश्न खडा भएको छ? प्रेमको परिभाषा सबैका अलग अलग पृथक छन होला तर अहिले नेपाली समाजमा बिकारल रूप लिएर पैदा भएको छ । प्रेमका शब्द जसरी जताबाट परिभाषित गरे पनि हामी नेपाली समाजमा अहिले धैरै अपाच्यको समय सृजना भएको छ । खोइ कताबाट यो बिषयमा सुरू र अन्त्य गर्ने हाम्रो समाज अन्योलमा गुरजिरहको छ ।फुर्सदमा